Browse:Home Articles Maxaa Somaliland saboolka ka dhigay ? Qore:Axmed Aw Salawaad	Maxaa Somaliland saboolka ka dhigay ? Qore:Axmed Aw Salawaad
Comments Off	DalkanSomaliland waa dal hodan ku ah hanti same badan, oo bad kaluun Fatahaysa , dhul beereed balaadhan , xoolo tiro badan seddexda meesi ba ah ilaah siiyey. Ku dar hanti samaha dhulka hoostiisa ceegaaga ee ku duugan ootiro beelay. Dalkaa waxaas hantisame ah ilaahaydhigay ayaa dadkiisu sabool Yihiin oo gaajo iyo saxariir ku noolyihiin. Haddaba maxaa inoogu Wacan Saboolnimada raagtay ee ina regaadisay ee dunida xageeda hoos ka Hoosaysa Inna dhigay.? Jilaal ba jilaal muxuu iigu dhibayaa?Maxaa dhaqaale xumada Inna baday? Ma cadho eebaa inna cusktay,? Ma waxaynu curinaa Oo aynu gacmaheena ku goosanaa ? Maxaa innaga hortaagan inaynu Gaadhano barwaaqo iyo nolol badhaadhe sida dunida kale? Xogto waxay tahay oo meelena loo dhaafayn, oo cudurku hoganayaa uu Deegaan ku yahay, fadhiisinna ka dhigytay: Intuu maanku gaajaysanyahay guuli waa weli.Wixii raagaa ba way xumaadaan !) Haydii ahaa Xukumadda, Guurtida, wakiilada iyo Garsoorka Oo musuuq oo dhex jiifo .
. Qurba jooga hoogaanka qabtay wuu burburiyey dalka:
Waayeen ee saxarrirsan. Codka waa bixiya daljoogayaasha , oo xaq u leh inay iaygu talada